Kitra – «Orange Pro league»: hihemotra indray ny fiverenan’ny fifaninanana | NewsMada
Kitra – «Orange Pro league»: hihemotra indray ny fiverenan’ny fifaninanana
Manahy ny tsy hisian’ny fifaninanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Orange pro league” ny rehetra. Mbola hihemotra indray mantsy ny fiverenan’ny fihaonana.
Raha heverina fa amin’ny volana aogositra ho avy izao no hanohizana ny fifanintsanana hiadiana ny ho tomponda­kan’i Madagasikara “Orange pro league”, taranja baolina kitra, tsy ho tanteraka indray izany. Anton’izany ny fitohizan’ny fihibohana tanteraka mihatra eto amin’ny faritra Analamanga.
Io no tinapaky ny Association de football elite de Mada­gascar (CFEM), mpikarakara ny hetsika sy ireo klioba 12 miatrika izany, ny asabotsy 4 jolay lasa teo, teny Andraharo. Na izany aza, samy niaiky ny rehetra fa ny fahasalamana aloha no laharam-pahamehana, mialoha ny hiverenan’ny fifaninanana indray.
Niarahan’ny rehetra nijery ireo paikady amin’ny hanohizana ny fifaninanana. Nisy ny fanolorana ireo “formule” isan-tokony. Anisan’ izany ny soso-kevitra hanatontosana ny “Play-off”, ho an’ireo ekipa valo voalohany eo amin’ny filaharana. Fihaonana tsy azon’iza na iza atrehina na “à huis clos”, ao anatin’ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana.
Teo ihany koa ny nilazana fa faranana avy hatrany ny taom-pilalaovana ka iarahana manendry ny ekipa iray hisolo tena an’i Madagasikara eo amin’ny fifaninanana afrikanina.
Natao an-tsoratra ireo hevitra roa ireo ka halefa any amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena (MJS) sy ny Federa­siona malagasin’ny baolina kitra (FMF), mampaha­fantatra izay mety hataon’ny CFEM, aorian’ny fahavitan’ny fihibohana. Ampiarahina amin’izany ny fangatahan’ireo klioba 12 fanampiana ara-bola ary tohana mba hahazoan’izy ireo mihodina sy mampandeha ny klioba indray.
Tsiahivina fa nitsahatra teo amin’ny andro faha-15, ity fifa­nintsanana “Orange pro league” ity. Mbola misy eo amin’ny andro fito izany sisa tsy tontosa.